व्यपार / व्यवसाय Archives - Page 26 of 44 - Purbeli News
काठमाडौँ / दशैँ आउन १५ दिन अगावै वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकट बुकिङ सकिएको जनाएका छन् । यसले खासगरी, लामो तथा दूर्गम गन्तब्यमा जाने यात्रुलाई थप समस्या बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । राजधानी काठमाडौँबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्ने वायु सेवाले ७० देखि ७५ प्रतिशत टिकट बुकिङ भइसकेको बताएका छन् । बुद्ध एयर, यती एयर, श्री एयर, सौर्य एयरलगायतले दशैँक...
सस्तिएको सुनको मूल्य आज फेरी बड्याे ? हेर्नुहोस् कति छ आजकाे बजारभाउ
काठमाडौं / बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा एक सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५७ हजार आठ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन शुक्रबार प्रतितोला ५७ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदी पनि तोलामा १० रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला सात सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदी शुक्रबार प्रतितोला सातसय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचा...
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा झर्यो ? हेर्नुहोस्
काठमडौं / बजारमा आज फेरि सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा तीन सय रुपैयाँ झर्दै ५८ हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५८ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य घटेपनि चाँदीको मूल्य भने आज यथावत नै छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला सातसय ३० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको ने...
फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो आज ?
काठमाडौ / बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढेको छ । आज सुन तोलामा तीन सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५८ हजार चार सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५८ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला सात सय २५ पुगेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला सात सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यव...
इटहरी । श्रेष्ठ ईन्टरटेनमेन्ट एण्ड हस्पिटालिटी प्रा. लि.ले इटहरीको केन्द्रमा पहिलो आकर्षक सपिङ्ग मल र अत्याधुनिक सिनेमा हल सहितको सेन्ट्रल प्लाजाको उदघाटन भएको छ । १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्लाजाको रिवन काटेर उद्घाटन गरेका हुन । बजारको आकर्षक स्थलमा रहेको १० तल्ले यस सेन्ट्रल मलको ग्राउण्ड फ्लोरदेखि तेश्रो तल्लासम्ममा अन्तराष्ट्रिय...
आज कति सुनचाँदीको मूल्य ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । आज पनि सुन प्रतितोला ५८ हजार एक सय रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । सुन हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदी पनि प्रतितोला सात सय २० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज फेरि सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ । आज सुन तोलामा चार सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५८ हजार चार सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं / बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५८ हजार रुपैयाँ छ । सुन हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तलमाथि भएको छैन । आज पनि चाँदी प्रतितोला सात सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
मुस्ताङ / जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध बनेपछि स्याउ ढुवानीमा समस्या भएको छ । भौगोलिक प्रतिकूलता, निरन्तरको वर्षा र कटानका कारण अघिल्लो हप्तादेखि अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा बगैँचाबाट टिपेर बजार पठाउन ठिक्क पारिएको स्याउ गोदाममै कुहिन थालेको छ । झण्डै ७६ किलोमिटर लामो बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौँ ठाउँमा...